यस वर्षको एसईई आगामी वैशाखमा सञ्चालन हुने – List Khabar
Home / समाचार / यस वर्षको एसईई आगामी वैशाखमा सञ्चालन हुने
यस वर्षको एसईई आगामी वैशाखमा सञ्चालन हुने
admin January 23, 2022 समाचार Leaveacomment 34 Views
बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले आगामी वैशाखको सुरुमा परीक्षा सञ्चालन हुने र सोका लागि परीक्षा तालिका केही दिनभित्र सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । उनले भने, “परीक्षाका विषयलाई लिएर दोधारको स्थितिमा रहनु पर्दैन, परीक्षा हुन्छ । विद्यार्थी अहिलेदेखि नै परीक्षाको तयारीमा जुट्दा हुन्छ ।”
उनले वैशाखमा परीक्षा सञ्चालन गरिए पनि कक्षा ११ को नयाँ शैक्षिक सत्रसम्बन्धी क्यालेन्डरमा कुनै असर नपर्ने गरी नतिजा प्रकाशन गरिने बताए । आगामी चैतमा शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी शिक्षक पदका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेकाले पनि सो महिनामा एसईई सञ्चालन गर्न समस्या देखिएको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
Previous रातिमा देख्ने यस्ता अनेकौ सपनाहरुले भविष्यबारे बताउछ यस्तो संकेत, जानिराखौ!
Next अस्ट्रेलिया सरकारले गर्यो नेपाली विद्यार्थीलाई फाइदा पुग्ने यस्तो घोषणा, नेपाली खुसी